आर्यनको अंगालोमा सृष्टि, तालको किनारामा रोमान्स ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV आर्यनको अंगालोमा सृष्टि, तालको किनारामा रोमान्स ! | Sagarmatha TV
काठमाडौं । सन् २०१२ की मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ लगातार चलचित्रमा देखिँदै आएकी छिन् । पछिल्लो पटक रोमियो एण्ड मुनामा देखिएकी सृष्टिकै अभियन रहेको चलचित्र ‘बाँध माया’ले प्रदर्शनको तयारीमा छ ।
फिल्ममा नायिका श्रृष्टिसँगै अभिनेता आर्यन अधिकारीको अभिनय रहेको छ । आर्यन पछिल्लो पटक चलचित्र ‘बटरफ्लाई’मा देखिएका थिए । तर उक्त चलचित्रले भने दर्शकको साथ पाउन सकेन । त्यसैले पनि ‘बाँध माया’ले चलचित्र यी दुबै कलाकारका लागि प्रतिक्षित चलचित्रका रुपमा हेरिएको छ ।
बाँध मायालाई भने सवीर श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्म आगामी असोज ५ देखि प्रदर्शनमा आउनेछ । रामहरी धिताल र विभिषिका श्रेष्ठ फिल्मका निर्माता हुन् । फिल्ममा अर्जुन पोखरेलको संगीत, कविराज गहतराज, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, बाबु श्रेष्ठको छायाँकन र रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व रहेको छ । फिल्ममा आर्यन र सृष्टिसँगै राजारामपौडेल, रविन्द्र प्रताप सेन र विशाल चाम्लिङको अभिनय छ ।
‘गाजलु’बाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी सृष्टिको हिजोआज चर्चा पनि चुलिँदो छ । उनी अभिनित फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ हालै प्रदर्शनमा आयो । फिल्ममा उनले गरेको अभिनयलाई दर्शकदेखि समीक्षकले प्रशंसा गरे । चलचित्रमा उनको भूमिकालाई दर्शकले रुचाए पनि चलचित्रको व्यापारिक रिपोर्ट भने गतिलो देखिएन । यसअघि उनले चलचित्र लालपूर्जामा पनि छोटो भूमिका निभाएकी थिइन् ।